ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ, ပါတနာမိတ်ဆွေတို့အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ - iPartner7plusပြိုင်ပွဲကြီး စတင်ကျင်းပပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြေငြာပေးခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲပျော်ရွှင်မိပါတယ်!
ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်မျိုးပါလဲ? ဆိုလိုတာကတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရရင် တကယ့်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ဆုလက်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့: Retina 4K display 3.1GHz 1 TiB 21.5 လက်မ iMac, 13 လက်မ MacBook 2.0GHz 256 Gb, နှင့် iPhone7Plus 128Gbတို့ကို ရရှိနိုင်ပြီးနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ စိန့်ပီတာဘက်ခရီးစဉ်ဆုကို သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ရရှိမယ့် အထူးအခွင့်အရေးကောင်းရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာပြဲဖစ်ပါတယ်။.
အနိုင်ရရှိဖို့အတွက် ဘာများလုပ်ဆောင်ရမှာပါလဲ? လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူလှပါတယ် - တတ်နိုင်သမျှဖောက်သည်များများရှာလိုက်ပါ FBS တွင်စရံငွေထည့်ပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းပါ. ဖောက်သည်များများရလေ - အမှတ်မျာများရလေ - အနိုင်ရရှိဖို့ အခွင့်အရေးများများရလေပဲဖြစ်ပါတယ်. ကြားရတဲ့သတင်းက မိုက်​တယ်​မလား?
ပြီးတော့ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်- နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ၃ခုမှာ အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ ပါတနာကို(iPartnerပြိုင်ပွဲ၊ iPartner 7ပြိုင်ပွဲနှင့် လက်ရှိ iPartner7Plusပြိုင်ပွဲ) ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ရှိ FBSရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ဆုကို ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ယခင်ပြိုင်ပွဲများမှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးတယ်ဆို၇င်တော့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးစာရင်းတွင်ပါဝင်သော မြို့တော်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အခွင့်အရေးက သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်!